Soo dejisan Emacs 24.5 – Vessoft
Horumarinta, Tafatirka Text
Soo dejisan Emacs
Emacs – editor qoraal oo taageero ka mid ah hawlaha aasaasiga ah iyo hababka dheeraad ah a. software The waa inay awoodaan inay edit noocyada kala duwan ee files iyo afaf badan barnaamijyada shaqeeyaan. Emacs enbales in howlgeliyo inta badan furayaasha keyboard iyo isku iyagoo bixiya isticmaalka habboon ee falalka inta badan lagu sameeyaa. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize xuduudaha badan oo software ah ee baahida shakhsi ahaaneed ee user a. Sidoo kale Emacs waa awoodaa inuu ballaariyo fursadaha ay u gaar ah by xiriir ah lagu daro kala duwan.
hababka qalliinka kala duwan
Beddelidda furayaasha keyboard
Qaabeynta ee goobaha ku habboon baahidaada
Connection of kordhin
Emacs Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Vim 8
العربية, English, Français, Español... Blender 2.78
K-Lite Codec Pack 12.4.4 Full, Basic, Standard iyo Mega
العربية, English, Українська, Français... HTC Sync 3.3.63